Madaxweynihii hore ee maxkamada Hayg oo soo faqay musuqii ka dhacay 12 Oktoobar - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Madaxweynihii hore ee maxkamada Hayg oo soo faqay musuqii ka dhacay 12 Oktoobar
Somaliya ayaa guul ka soo hoysay baddeedii Kiiniya ku qabsatey waxase madaxweynihii hore ee isla maxkamadan u sheegay in maxkamadu gashay wax ayna shaqo ku lahayn taas oo aqoonyahanada badankoodu u fasirteen in musuq baaxadle goobta ka dhacay.
“Maxkamadu in ay leexiso Xariiqa Badda waa go’aan Sharci darro ah, Waxay ka baxday awoodeeda sharci ee ah iney kala sheegto Cidda iskaleh aagga muranka iyadoo u gudubtay qeybinta Juquraafi taas oo Kiiniya wax eysan laheyn ku heshay “ayuu yiri Garsoore Cabdulqawi Yuusuf.
Haddaba musuqan baaxada leh yaa loo aanaynaa
Aqoonyahanada ku takhasusay arimaha noocana ayaa badankoodu qaba in musuqaan ayna Kiiniya awood u lahaan karin inay gasho ayse qaybta ugu weyn lahaayeen wadamada Maraykanka iyo Ingiriiska oo Kiiniya la jira. Shirka Uhuru la qaadanayo Joo Baydin ayaa ah mahadcelin iyo in Maraykanku inta la reebay uga baadho saliid iyo gaas ayuu yiri Xuseen Warsame.
Somaliya ayaa gacanteeda lagu soo celiyay boqolkiiba 80 halka 20-ka soo haray loo reebay kumana jiraan aaga ay ka raadsanaysay saliida iyo gaaska oo hadda ku jira gacanteena.
Inkastoo inta hartey ay ku nolyihiin Somali iyo dadka kale ee Muslimka ah waxa muhiima in la hubiyo in dadkaasi helaan horumarka ay xaqa u leeyihiin waana halka looga baahan yahay inay Somaliya ka qaadato doorkeeda ayuu qabaa Cali Calasow.